म उम्मेदवार हुँदा कसैले अपमानित हुनुपर्दैन : राजेन्द्र लिङ्देन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङ्देनले आफूले उम्मेदवार घोषणा गर्दैमा कसैले अपमानित हुनु नपर्ने बताएका छन् ।
आफ्नो उम्मेदवारी घोषणालाई उनले देश बचाउने र राप्रपालाई एक नम्बरको पार्टी बनाउने अभियानको रुपमा व्याख्या गरे ।
राप्रपाका एकजना अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले लिङ्देनलाई समर्थन गरेको जानकारी दिन मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिङ्देनले सो कुरा बताएका हुन् ।
पुस्ता र उमेरको कुरा गरेर मात्रै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘उमेर र पुस्ताको कुरामात्रै होइन । उमेरको कुरा गर्ने हो भने राजाको आशिर्वाद लिएर ३०-४० वर्षको उमेरमा मन्त्री भएका थिए । त्यसबेला हामीले सोधेका थियौं र ? यो राप्रपा मात्र होइन, देश बचाउने सन्देश लिएर जाने कुरा हो ।’
राप्रपालाई बचाउन राप्रपाभन्दा बाहिरका मान्छे पनि पार्टीमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले कार्यकर्ताको कुरा सुन्न थापालाई आग्रह गरे । ‘राप्रपालाई बचाउन राप्रपाभन्दा बाहिरको मान्छे ल्याउनुपर्छ । सम्पूर्ण कार्यकर्ताको कुरा सुन्नुस्, यहाँभन्दा बाहिरको कुरा सुन्नुस् ।’ राप्रपाभित्रको कुरामात्रै सुन्दा तीन प्रतिशतमा खुम्चिनुपरेको कुरालाई स्मरण गर्न उनले आग्रह गरे ।
राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन नभए अन्य दलको दलाली गरेर दुई-चारवटा मन्त्री पद पाउने पार्टीमात्रै हुने बताउँदै उनले भने, ‘मेरो कल्पनाको, सपनाको पार्टी त्यो होइन । राप्रपालाई अग्रजहरुकै सल्लाहमा, उपस्थितिमा एक नम्बर पार्टी बनाउने अभियान हो ।’
लिङ्देनले राप्रपाका अन्य दुई अध्यक्ष (कमल थापा र पशुपति शम्सेर जबरा)लाई पनि समर्थन गरिदिन आग्रह गरे । लिङ्देनले ६ महिनाभित्र राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने साना पार्टी र संस्थासँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने पनि बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस एमाले–माओवादी संसदीयदलको संयुक्त बैठक बस्दै, पार्टी घोषणको अन्तिम तयारीमा !
१४,मंसिर.२०७८,मंगलवार १३:२० मा प्रकाशित
← सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा हेर्दाहेर्दै र निसुमा रहेका सबै मुद्दाको फेरि सुनुवाइ हुने
नेपालले कोरोना विरुद्धको थप ७ लाख २५ हजार डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो, थप दुई खेप यसैसाता →